सेलिब्रेटी Archives - इ कान्तिपुर टाइम्स
जनतालाई मान्य नहुने एमसीसी लागु गर्नु हुँदैन : राजेश हमाल
इ कान्तिपुर टाइम्स २६ भाद्र २०७८, शनिबार १७:०४ 0
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई स्वीकार गर्ने/नगर्ने विषयमा सडकदेखि सदनसम्म चर्को बहस चलिरहको छ । यसैबीच हमानायक राजेश हमालले पनि एमसीसीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । महानायक हमालले सोसल मिडिया फेसबुकमार्फत् एमसीसीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । सडकदेखि सदनसम्म नै एमसीसीको चर्को विरोध भइरहेको समयमा महानायक हमालले पनि एमसीसी लागू गर्न नहुने बताएका छन् । फेसबुकमा भिडियो पोष्ट गर्दै हमालले नेपाली
नवराजको नयाँ भिडियो ‘आई लभ यु’ सार्वजनिक
इ कान्तिपुर टाइम्स २३ चैत्र २०७७, सोमबार ०७:३० 0
नेपालगंज । मोफसलका व्यस्त भिडियो निर्देशक नवराज सुवेदीले एक कार्यक्रमकाविच ‘आई लभ यु महिन’ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन । हाल सम्म चार दर्जन वढी म्युजिक भिडियो निर्देशन गरिसकेका सुवेदीको यो ५२ औ भिडियो हो । आर. के.सी. डिजिटल युट्युब च्यानलवाट सार्बजनिक गरिएको यो गीतमा करन चौधरी र समिक्षा चौधरीले स्वर दिएका छन । करन चौधरीको शब्द संगीत, केशव बडुको एरेन्ज, कुमार रानाको मिक्सिङ्ग रहेको गीतमा देवदास र
“कलियुगको एउटा कृति, बनोस् हाम्रो माया प्रीति”
इ कान्तिपुर टाइम्स २२ फाल्गुन २०७७, शनिबार २०:५३ 0
काठमाडौं : नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्ना अब्बल सृजना साथ छुट्टै पहिचान बनाउन सफल सर्जक हुन् सुरज गैह्रे ‘विवश’। प्रायः जसो जीवन बोल्ने जीवन्त सृजना गर्न खप्पिस सुरजले प्रेमिल सृजना पनि त्यतिकै उत्कृष्ट गर्ने गर्छन् । अरु सर्जक भन्दा अलि भिन्नै गीतहरु सृजना गर्न रुचाउने सुरजका दर्जनौं बढी गीतहरू लोकप्रिय छन् । यसैबीच, उनको शब्द सृजना रहेको पृथक शैलीको एउटा प्रेमिल गीत रिलिज भएको छ। मंगलबार “एउटा कृति” बोलको गीत “माइ
निर्देशक नवराजको म्युजिक भिडियो हुदै ठूलो पर्दासम्मको यात्रा
इ कान्तिपुर टाइम्स ७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १२:४८ 0
राम सापकोटा, काठमाडौं । कोहलपुर-०५ पिपिरिमा जन्मी नेपालगंजलाई कर्मथलो बनाएका नृत्य निर्देशक नवराज सुवेदी हिजोआज निकै व्यस्त छन । नेपालगंजको सगरमाथा बोर्डिङ स्कुलको जागिरे उनी मोफसलमा रहेर महिनामा २/३ वटा भिडियो निर्देशन गरिरहेका हुन्छन । पछिल्लो समय आधुनिक सहित थारु गीतहरुको भिडियो निर्देशन गरेका उनी आफु कला क्षेत्रमा नै काम गर्नकालागी जन्मेको बताउछन । विभिन्न स्कुल र सांस्कृतिक कार्यक्रममा नृत्य सिकाउदै म्युजिक भिडियोको यात्रा तय गरेका सुवेदिले रमेश वनगोसाइको ‘द
लोकप्रिय गायिका अञ्जु विवाह बन्धनमा बाँधिँदै
इ कान्तिपुर टाइम्स १६ माघ २०७७, शुक्रबार १४:४७ 0
काठमाडौं । नेपाली गीतसंगीत क्षेत्रकी लोकप्रिय गायिका अञ्जु पन्त चाँडै विवाह बन्धनमा बाँधिँदैछिन् । गायक तथा संगीतकार मनोजराजसँग सम्बन्ध टुटाएको लामो समयपछि अञ्जुले विवाह गर्न लागेकी हुन् । स्रोतका अनुसार अञ्जुले थीर कोइरालासँग विवाह गर्न लागेका हुन् । ‘सिंगल’ भएपछि विवाहको प्रश्नले घेरिरहेकी लोकप्रिय गायिका अञ्जुले अब त्यसको सामना गर्नुपर्ने छैन । पत्रकारहरुले ‘विवाहको बारेमा प्रश्न गरेर हैरान बनाएपछि पछिल्लो समय ‘छोरीकै दवावका कारण विवाह गर्ने’ बताउँदै आएकी थिइन् ।
बाँकेको गाभर भ्यालीमा पल र गरिमा
इ कान्तिपुर टाइम्स २१ पुष २०७७, मंगलवार २१:५० 0
नेपालगन्ज : पछिल्लो समयका अत्यन्तै व्यस्त मोडल तथा लोकप्रिय नायक पल शाह यतिबेला बाँकेको गाभर भ्याली तथा होमस्टेमा रहेका छन् । पलसंगै मोडल गरिमा शर्मा पनि गाभर भ्यालीमा रहेकी छिन् । उनीहरू एउटा थारु गीतको म्युजिक भिडियो छायांकनको लागि बाँकेको गाभर भ्याली आइपुगेको बताइएको छ। उसो त पलले एउटा गाभर भ्यालीमा मोडल गरिमा संग खिचेको तस्वीर फेसबुकमा पोस्ट गर्दै आफुहरु गाभर भ्यालीमा रहेको जानकारी गराएका छन् । पल र गरिमाका अलवा
सत्य-स्वरुपको ‘मैसाब’ टिकटकमा भाइरल बन्दै(भिडियो)
इ कान्तिपुर टाइम्स ३० मंसिर २०७७, मंगलवार १६:०० 0
काठमाडौं । गायकद्वय दाजुभाइ सत्यराज आचार्य र स्वरुपराज आचार्यको ‘मैसाब’ सामाजिक सञ्जालमा छाउन थालेको छ । यही मंसिर ११ गते युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिएको सत्य–स्वरुपको स्वरमा रहेको ‘मैसाब’ बोलको गजल केही दिनयता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुमा भाइरल बन्न थालेको छ । सार्वजनिकको सुरुवाती दिनमा सांगीतिक क्षेत्रहरुबीच चर्चामा रहेका मैसाब केही दिनयता टिकटक, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । सांगीतिक बजारमा चर्चामा रहेको मैसाब अब दर्शक र स्रोताको मन पनि जित्न थालेको